घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू बिरोधको बिरोध
एलबीले पूर्ण स्टोरी फुटबल प्रतिभाशाली प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैलाई उपनामद्वारा चिनिन्छ; "सर्कू"। हाम्रो डेस Mertens बालबालिकाको कथा प्लस अनबल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खातालाई उनीहरूको बचपनको मिति सम्म ल्याउँछ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि र धेरै बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो मृत-बल विशेषज्ञ हो। हुनत, केवल एक हात केहि प्रशंसकहरु डेम्स मार्टन्स को बायो को बारे मा धेरै जान्दछन् जो धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
डेस Mertens 6th मई 1987 मई मा उनको आमा, मारिगेके Mertens र बुबा, हरमन Mertens मा बेल्जियम को फ्लेमिश क्षेत्र, लियोन मा। डेस फुटबल-मायालु आमाबाबुले मात्र एक मात्र बच्चाको लागि एकदम ठूलो दृष्टि थियो कि एक विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ।
तिनले आफ्नो आमाबाबुको लागि धेरै आदर गरे जसले तिनको जीवनको आवश्यक नैतिक र नैतिक मानहरू सिकाउनुभयो। जस्तै कि कसरी कसरी सिक्न मिल्दछ जीवनमा साना कुराहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस्।
विद्यालयमा हुँदा, डेस मेर्टन्स एक विनम्र र फिर्ता लिइएको केटा थियो जसले शिक्षाविद्मा राम्रो प्रदर्शन गरे। त्यसपछि त्यसपछि, तिनको विद्यालयले उनलाई खेलकूद अवधिको दौडान प्रतियोगी फुटबल खेल्ने अवसर प्रदान गर्यो। आदर्श रूप मा, Mertens हरेक सेकेंड को उपयोग उनको ब्रेक को समयमा फुटबल को लागि थियो। उहाँको बल को सम्भालन गर्न को लागी उनको टीम को तुलना मा उनको स्कूल कोच लाई उनको आमाबाबु को मिलन र उनको छोरा को पेशेवर फुटबलर बनने मा मदद गर्न को सल्लाह दिए।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
मध्य-1990 को समयमा, बेल्जियमले फुटबलको उत्साहको नयाँ लहर देखाए। केवल 11m को जनसंख्या संग देश 1998 मा एक जलविद्युत पल थियो जब उनको राष्ट्रीय टीम को निराशाजनक 1998 विश्व कप समूह टूर्नामेंट देखि बाहिर दुर्घटनाग्रस्त भयो।
बब ब्रोएले, को कोच थिए बेल्जियम प्रत्येक तहमा युवा टोलीहरू सभलोनको ब्लुप्रिन्ट कागजातमा राख्न को लागी कार्यरत थिए जुन "युवाहरूमा एकीकृत दृष्टिकोणको कमी"त्यसोभए फुटबल। यस कागजातले काउन्टीमा फुटबलको दृष्टिकोणमा कट्टरपंथी परिवर्तनबारे छलफल गर्न 30 बेल्जियम फेडरेशन कोच बैठक समाप्त भयो।
उनीहरूको निष्कर्ष एक थियो कि त्यहाँ विजेता र विकास मा पर्याप्त छैन मा धेरै धेरै जोर थियो। यसले बेल्जियममा युवा फुटबलको क्रांतिको नेतृत्व गर्यो Dries Mertens एक लाभार्थी बन्नुभयो।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -स्विच
उनीहरूको आमाबाबुको रूपमा दृष्टिगत रूपमा, उनीहरूले पहिले नै फ्रान्स 1996 विश्व कप अघि स्टेजड ल्युवन दुई वर्ष (1998) स्थानीय रोस्टरमा नामाकरण गरे जुन बेल्जियम फुटबलको क्रांति बढ्यो।
बेल्जियममा फुटबल क्रान्ति सुरु गरेपछि, युवा फुटबल विकासको लागि रकम उपलब्ध भयो। यसले ठूलो क्लबहरू जस्तै एन्डरलेचटलाई मन परायो जसको स्काउट्स स्थानीय क्लबहरूबाट प्रतिभाशाली बच्चाहरू सशक्त भए। एन्डरलेच को यो स्काउट्सले उनको क्लब मा मार्टन्स लाई भेट्यो, अन्ततः उनलाई एक्सएनएनक्सक्स मा क्लब को युवा अकादमी मा शामिल होने को अवसर प्रदान गरे।
डाईर्स मार्टन्स 'आमाबाबुको बावजूद धनी नहुने भएपनि उनीहरूको छोराको लागि उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो सहयोग दिए। डिस्सले सही रूपमा भन्यो;
"मेरो बुबा सामान्यतया मेरो बस संग एन्डरलेच सम्म चलाउछ र उहाँले मलाई 11 उमेर देखि ब्रुसेल्स मा प्रशिक्षण दिन हरेक दिन पुरानो ले लिया"
एन्डरलेच्टमा उनको स्विच पछि, उनको समयिय क्लबले बेल्जियम फुटबल प्राधिकरणहरूले उस समयमा मशरूम क्लबहरू लक्षित गरेपछि भंग गर्नुअघि समय लागेन।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -असहमति
डेस मार्टन्सले अन्डरलेचको युवा युवा सेटअपमा पाँच वर्ष बिताएपछि उनी आफ्नो जवानको सबैभन्दा ठूलो निराशाको सामना गर्थे। उहाँ 2003 मा रिलीज गरिरहनुभएको थियो, उसलाई भेट्न को लागी एक पेशेवर स्तर मा प्रतिस्पर्धा को धेरै छोटो र शारीरिक रूपमा असक्षम हुन कोचहरु संग।
Anderlecht देखि उनको रिलीज पछि, Mertens साथी साथी बेल्जियम प्रो लीग द्वारा हस्ताक्षर गरे, गेन्ट जहाँ उनको युवा कैरियर खत्म गर्न को लागि सबै युवा रैंकों मा चढ्यो। फेरि, आफ्नो करियरमा उन्नति एक समस्या भयो। Gent मा कोचिंग स्टाफ, अन्डरलेक मा धेरै भन्दा पहिले, अझै पनि उनको मामूली फ्रेम दिए Mertens को असंगत बनी रहे। उसलाई बेचेको सट्टा, तिनीहरूले ऋणमा पठाउन निर्णय गरे। यस समय नेदरल्यान्डमा एपेलोर्नको AGOVV गर्न।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
नेदरल्यान्ड्समा सीमा पार गरेर पेशेवर फुटबलको लागि मार्टन्सको पथ केवल नै सुरु भयो। एगवोभ एपेलेडोर्न मार्टन्सको करियरको लागि लन्चप्याड बन्नुभयो।
त्यहाँ उनले उत्कृष्ट, कप्तान भए, र 2009 गौडेन स्तरीय जीता, डच दोस्रो विभाजनको उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मानित गर्यो।
अस्वीकृति को उनको परेशानियों को कारण, मार्टन्स प्रसिद्धि को लागि देर देखि ब्लूमर बन गयो। उनले 22 मा उच्चतम तहमा मात्र फुटबल खेल्न थाले, जसलाई 2009 मा यूट्रेटको लागि आफ्नो ईडिभाइसी पहिलो पटक बनाइयो। उनको प्रदर्शनले चार वर्षमा पहिलो पटक युरोपका लागि क्लिलिफाइजको मामूली क्लब, यूट्रेटको नेतृत्व गर्यो जसले यस वर्ष उनको डेच लीग फुटबलरको नाम नामाकरण गर्यो।
त्यस समयमा, बेल्जियमको उदय देशमा कथा कथाहरूको बारे सबै भन्दा बढी कुरा भयो। यो फीटले उनलाई 2011 मा PSV मा उड्यो। 37 आविष्कारहरूमा 62 लक्ष्यहरूसँग फेरि प्रभाव पार्ने क्रममा, नापालले कल गर्दै। Mertens बन्यो राफेल बेइटेजपहिलो नयाँ नपोली प्रबन्धकको रूपमा साइन इन गर्नुहोस्। नापोलीमा, सुन्दर मार्टन्स (तल चित्रित) गुरुङको कम केन्द्र प्रयोग गरी व्यापक क्षेत्रहरूमा बजाउन प्रयोग गर्थे जसले उनलाई शीर्ष प्रतिद्वंद्वीहरू बाबा बनायो।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
डेस Mertens साँच्चै सुन्दर छ र लिनुभयो (माफ गर्नुहोस् देवहरु !!)। उनको हृदय उनको एक र मात्र बचपन प्यारी, केट केरखाफ्स संग सम्बन्धित छ। दुई प्रेमिका 10 वर्षको लागि गाँठ बाँधेर निर्णय गर्नु अघि मिति।
जुन 2015 मा, मार्टन्सले आफ्नो बचपनको प्रेम र नेपल्स मा साझेदार कटलाई विवाह गरे।
कट एक नर्तक र शोधकर्ता हो जो एक अमीर घर देखि आउँछ। उनको पिता, आखिर श्री केरखाफ्स एक लोकप्रिय संगीतकार और साथ ही सत्तर में एक ड्रमर था। उहाँले 2004 को क्रिसमस पूर्व मा एक दिल को दौरा को मरे।
अजीब युगल: केट केखोफ्सले एक पटक बेल्जियम टेलिभिजन च्यानल वेयरलाई बोलाइन्, जहाँ उनले स्वीकार गरे कि उनी र उनको पतिले सार्वजनिक, खास गरी ट्रेन प्रशिक्षकहरूमा मनपर्ने रमाइलो गर्छन्।
गेर्ट लेट नाइट संग साक्षात्कार मा, केट केरखाफ्सले भन्यो;
"जनतामा, म एक महिला जस्तै व्यवहार गर्छु, तर बिहेमा म एक्सिसी हुँ। मलाई लाग्छ कि जब तपाईं आफैंको अंतरसंगत स्तरमा पक्का हुनुहुन्छ भने, चीजहरू सामान्य स्तरमा राम्रो हुन्छ। म यसलाई ठाउँहरूमा सानो असामान्य गर्न चाहन्छु, रेलको बेसिन जस्तो। मलाई धेरै मन पर्छ। "
हेलोवीन लाइफ: नेपोलिस एक पटक एक जोडा-अनुकूल हेलोवीन आयोजना गरियो। डेस Mertens र उनको पत्नी काटि नैप्पी टोलीको दुई टोलीका रूपमा प्रस्तुत गरेर रचनात्मक प्राप्त गर्न बाध्य भए।
मार्टन्सले बताइन् कि उनी र उनको असल महिलाले आफ्नो हेलोवीन अर्थात् उनको नापोली टोलीका दुई जनाको रूपमा लुगा लगाए; Lorenzo Insigne र माराक हम्सिक.
माथिको फोटोमा देखिए अनुसार, उनीहरूले उनीहरूको प्रामाणिक टैटू आस्तीन, हिपटर चक्र र ग्याँस मोहब्बको स्थानमा राखेका छन।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बेबी उहाँलाई नाम दिइएको छ
एक पल्ट एक पल्ट, डेस Mertens र उनको बेल्जियम टीम को बाकी एक नवजात बेल्जियम बच्चा को नाम ले एक मापदण्ड को रूप मा प्रयोग गरे। अज्ञात बच्चाको आमाबाबुले भने कि तिनीहरूको बच्चालाई अल्जेरियाको विरुद्ध बेल्जियम म्याच-विजेताहरूको नाम दिइनेछ।
आमाबाबुले भने Het Laatste Nieuws:
"हामी सहमत भए, यदि तिनीहरूले त्यो खेल जित्छन् भने, हामी हाम्रो छोरा तीतस, गोल स्कोरकर्ताका सबै नामहरू दिनेछौं। यदि टीमले पाँच पटक स्कोर गर्छ भने, हामी पाँच नामहरू दिनेछौं। "
अन्ततः, एवेलीयन जोनकेहेरी र पीटर टिजिगेटका आमाबाबुले आफ्ना नवजात बालकलाई नाम दिए, तीतस मारौने डेस टाइजगाट। यो मतलब हुन्छ कि डेस Mertens र Marouane Fellaini म्याच विजेताहरू थिए।
Dries Mertens Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -कुनै चीन मोनिज छैन
डेस Mertens एकपटक चीनमा ठूलो पैसा सावधानी खारेज गर्न अस्वीकार गर्यो कि उनको आमाबाबुले उनको साथ निराश हुने भए भने उनले मोनिजको पीडा गरे। यसले हामीलाई ल्याउँछ, अझ बढी जान्नुहोस् डेस Mertens पारिवारिक पृष्ठभूमि। यसबारे बोल्दै, डेसले उनीहरूको आमाबाबुको नैतिकताले उनलाई धेरै पैसाको लागि प्रेमको विरोध कसरी बनायो।
"मेरो आमाबाबुले मलाई बच्चाको लागि के गरेको लागि धेरै आदर गर्दछ। तिनीहरूले मलाई पैसाको बारेमा कुरा नगरेनन् - यदि म चीन गए भने म तिनीहरूलाई निराश पार्छु। "
प्रस्तावमा सही रकम खुलासा बिना, Mertens भर्खरै यो ठूलो रकम बन्द गर्न कठिन थियो भर्ती। उहाँले जारी राख्नुभयो;
"हामीले प्रविधि र विपत्तिलाई तौल्यो, मेरी श्रीमतीले प्रशंसा गरेका मानिसहरूबाट प्रशंसा गरेका छन्। यसको बावजूद, मैले कुनै भन्नको लागि निर्णय गरे। म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि यस्तो रकम मनाउन गाह्रो छ। मेरा छोराछोरीहरू र मेरा दाजुभाइहरूले मेरो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभन्दा भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्नेछैनन्। "
तर, मेरर्टन्स - उनको जीवनको लागि राम्रो वेतन स्वीकार्नुमा महत्त्वपूर्ण छ - जोरले उनीहरूलाई सानो चीजको सराहना गर्न चीनलाई शुद्ध रूपमा पैसा दिएका थिए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डेस Mertens बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.